घुँडा टेकाउनुमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीको दोष छ, राष्ट्रपतिले पनि ध्यान दिनुपर्थो
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७५ कार्तिक ७ बुधबार |
दशैंको टीकामा सकिनासाथ सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपतिसँग टीका लगाउँदाको तस्वीरहरुका कारण विभिन्न तर्कहरु आए । तस्वीरमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सामु दशैंको टीका थाप्ने क्रममा दुबै घुँडा टेकेका थिए । अरु धेरै विशिष्ट व्यक्तिहरुले पनि त्यसैगरी टीका लगाए । जसका कारण गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रकालीन अवशेष देखा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले लामो फेसबुक स्टाटस लेख्दै टीका कार्यक्रम विवादमा आउनुमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी दोषी रहेको उल्लेख गरेका थिए । उनै थापासँग ऋषि धमलाले कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसपटकको दशैँमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले टीका लगाइदिएको विषय किन विवादमा आयो ? तपाईले पनि किन आलोचना गर्नुभयो ?
म पनि यही समाजको सदस्य हुँ । राष्ट्रपतिको सम्मान र मर्यादाका लागि सचेत कार्यकर्ता पनि हुँ । सबैले राष्ट्रपतिले पनि सम्मानका साथ टीका लगाइदिएको हेर्न चाहन्छन् । तर त्यसो भएन ।
जनताले त तपाईले विरोध गरेको पनि हेर्न चाहेका थिएनन् होला नि ?
मैले राष्ट्रपतिकहाँ गरिएको टीका कार्यक्रमको विरोध गरेको छैन । मैले के मात्रै गरेको छु भने टीका कार्यक्रमको प्रबन्ध गर्नेहरुले टीका ग्रहण गर्न आउनेहरुका निम्ति बस्ने ठाउँ उचित प्रबन्ध गरेनन् । यो राष्ट्रपतिको आफ्नै कमजोरी होइन ।
कसको कमजोरी हो त ?
राष्ट्रपति कार्यालयमा ठूलो जनशक्ति छ । नेपाल सरकारका सचिव, सेनाका परमसेनाधिपति, प्रोटोकलका लागि उपसचिव, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका सल्लाकारहरु, स्वकिय सचिवहरु छन् । यति धेरै जनशक्तिहरुले राष्ट्रपतिको कार्यक्रम शोभनीय बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । जे मन लाग्यो त्यही गर्ने होइन, जे गर्दा राष्ट्रपतिको गरिमा र मर्यादा रहन्छ त्यो गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा रहेका ति व्यक्तिहरु नै हटाउनुपर्ने अवस्था आएको हो त ?
त्यस्तो होइन । तर अबका दिनमा विवादरहित हुने गरी काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले क्यामराका सामु सार्वजनिक रुपमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलगायतका व्यक्तिहरुलाई घुडा टेकाएर टीका लगाउनुपर्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।
राष्ट्रपति आफैँले पनि यस्ता कुरामा ध्यान दिएर निर्देशन दिन मिल्दैन र ?
हो, यो कुरामा म सहमत छु । यस्ता विषयमा राष्ट्रपति आफैँ पनि सचेत हुनुपथ्र्यो । यद्यपी राष्ट्रपतिको कार्यक्रममा आँच आउने, विवाद आउने विषयमा कर्मचारीहरु नै जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।
तर सर्वसाधारले त राष्ट्रपतिमाथि नै आरोप लगाएका छन् नि ?
विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछि मात्रै चिनिएको व्यक्ति होइन । उहाँ पहिला तत्कालिन एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । नेपालको महिला सशक्तिकरणको आन्दोलनको एउटा मानक पनि हो । उहाँकै प्रस्तावमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर राज्यका हरेक निकायमा एक तिहाई महिला सहभागिताको कानुन बनेको हो । एउटा फोटोले उहाँको छवी धमिलो हुँदैन । अहिले टीका प्रकरणमा जे जस्ता तर्क आइरहेका छन्, त्यो पनि ठीक होइन ।